गुल्मीमा उन्‍नत जातको घाँस खाँदा ११ बाख्रा मरे Canada Nepal
Aug 04 2021 | २०७८, श्रावण २०गते
२०७८, श्रावण २०गते
अगस्टको अन्त्यसम्म माल्दीभ्सका ९० प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने तयारी
कोरोनाको संक्रमणबाट प्रहरी नायव निरीक्षकको ज्यान गयो
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य भन्छन् - सरकारले दिएको जिम्मेवारी स्वीकार्छु
र्यापर हनी सिंहमाथि पत्नी शालिनीले लगाइन् यस्तो गम्भिर आरोप, अदालतमा मुद्दा दर्ता
ग्लोबल आइएमई बैंकले सञ्चालनमा ल्यायो यी ७ स्थानमा नयाँ शाखा
नेप्सेमा आज पनि नयाँ कीर्तिमान, बजार पूँजीकरण ४३ खर्ब ५९ अर्ब
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो - मुलुक कोरोनाको तेस्रो लहरतर्फ अगाडि बढ्न थाल्यो
आठ अर्बको लगानीमा नक्सालमा पाँचतारे होटल निर्माण गरिँदै, १७५ गेष्ट रुम रहने
गुल्मीमा उन्‍नत जातको घाँस खाँदा ११ बाख्रा मरे
जेठ १८ २०७८
काठमाडौं - गुल्मीमा सोमबार ११ वटा माउ बाख्रा मरेका छन्। चन्द्रकोट गाउँपालिका –७ रुपाकोटको सिद्धेश्वर बाख्रा फर्ममा रहेका ११ बाख्रालाई उन्नत जातको घाँस खाँदा मरेका हुन् ।
बाख्राको उन्नत जानको कलिलो घाँस खुवाउदा मृत्यु भएको जनाइएको छ । लगातार पानी परेपछि बाख्रालाई उन्नत जातको नेपियरर सुडान जातको कलिलो घाँस खुवाइएको थियो । घाँस खाएपछि बाख्रा एक्कासी बिरामी परेका थिए ।
बिरामी परेका बाख्राको उपचार गरिए पनि सुधार नभएको र मृत्यु भएको बताइएको छ । यस्तै सोही फर्मका अन्य ३० बाख्रा पनि बिरामी परेका छन् ।
जेठ १८, २०७८ मंगलवार १९:५४:३८ बजे : प्रकाशित
एउटा खोपका लागि वृद्ध राईले गरेको सङ्घर्षको कथा - नागरिकता बुझाएको छु, हाम्रो पालो आउँदैन रे ?
फिदिम - कोभिड–१९ दोस्रो लहर जिल्लामा फैलनुअघि नै ज्येष्ठ नागरिकहरु तथा अत्यावश्यक सेवाका व्यक्तिहरुलाई कोभिशिल्ड खोप दिन थालिएको थियो । दोस्रो डोज नआए पनि १३ हजारभन्दा बढीले कोभिशिल्ड खोप लगाए जिल्लामा । त्यसपछि आउन थाल्यो भेरोसेल । यस पटकसम्म तीनपटक भेरोसेल खोप लगाउने अभियान चलिसक्यो । यस क्रममा ६० वर्षका नागरिकदेखि कर्मचारी, जनप्रतिनिधि लगायतले यो खोप पाए तर कतिपयले खोप लगाउन वास्ता गरेनन् । कसैले अफवाहका पछि लागेर खोप लगाउन मानेनन् । कतिपयले खोप लगाउन पाउने कुराको जानकारी नै पाएनन् ।
कोभिड–१९ को पहिलो लहरले पाँचथरको ग्रामीण जनजीवनमा ठूलो प्रभाव पारेन । गाउँमा निकै न्यून सङ्क्रमित हुनाले जनजीवन सहज र नियमित गतिमै अगाडि बढ्यो । दोस्रो लहरको प्रभाव भने निकै गहिरो भयो । तीन हजार ३०० भन्दा बढी जिल्लावासी दोस्रो लहरबाट सङ्क्रमित भइसक्दा गाउँ–बस्तीहरुको धारणा बदलिएको छ । गाउँभरि मान्छेहरु बिरामी पर्ने, सामान्य औषधिसमेत नपाइने र कोभिड–१९ सङ्क्रमणको महामारीले आतङ्कको स्वरूप लिएपछि मानिसहरु थोरै भए पनि सचेत हुनेतर्फ लागे ।
दोस्रो लहरले ल्याएको आतङ्कले आम मानिसमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनै पर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दियो । त्यही कारण खोप केन्द्रहरुमा मानिसहरुको भीड लाग्न थाल्यो । गएको शनिबारदेखि मङ्गलबारसम्म चलाइएको भेरोसेल खोप दिने अभियानमा ठूलै भीडभाड देखिए तर यही भीडभित्र बेथितिसँग मौन आन्दोलन गर्दै गर्दा भेटिनुभयो ७७ वर्षीय रामकुमार राई । धेरै टाढा त होइन, फिदिम नगरपालिका–१ दुमाका रामकुमारले ‘खोप लगाए कोरोना लागिहाले पनि धेरै गाह्रो पर्दैन’ भन्ने सुन्नुभएको रहेछ ।
सोमबार दिउँसो करिब २ बजे स्वास्थ्य कार्यालय पाँचथरमा खोप लगाउँदै गरेको स्थान छेउ अन्य ज्येष्ठ नागरिकसँग भेटिनुभयो उहाँ । बिहान ११ बजेतिर खोप केन्द्र आई नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाउनुभएका राईले समयमै खोप पाइएला र लगाउँला भन्ने सोच्नुभएको रहेछ तर पालो नआएपछि कतै पालो आइहाल्ला कि भनेर ८७ वर्षीय छिमेकी श्रीभक्त राईसँगै उहाँ कहिले खोप लगाएको ठाउँ पुग्नुभयो त कहिले खोप कार्ड वितरण भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयको ढोकाअघि ।
“अघि ११–१२ बजेतिर आएको थिएँ । नागरिकता पनि बुझाएको छु । पानी पर्न आँटिसक्यो । हाम्रो पालो आउँदैन रे ?”, यहाँ आउनुभएको कति समय भो भन्ने प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न गर्दै राईले भन्नुभयो, “अहिले आउँदै गरेको मान्छेहरु सुई हानेर गइसके । हाम्रो पालो किन आएन ? बुझिदिनुस् न ।”
पानी झर्नै आँटे जसरी आकाशमा बादल मडारिरहेको थियो । स्वास्थ्य कार्यालय परिसरमा ठेलमठेल गर्दै मानिसहरु खोप लगाउने अवसर खोजिरहेका थिए तर डाँडाको घामजस्तो उमेरका राईलाई पानीबाट जोगिएर कसरी सुरक्षितरूपमा घर पुग्नु भन्ने चिन्ता थियो । पानी परिरहने, घर जाने बाटोमा छेउभित्ता खसिरहने डरले राईको मन घरैमा पुगिसकेको थियो । उहाँ घरी घर हिँडिहाल्न खोजेर स्वास्थ्य कार्यालयको गेटमा पुग्नुहुन्थ्यो त घरी भीडको पछिल्तिर आएर नाम आइहाल्ला कि भनेर सुन्नुहुन्थ्यो तर ११ बजेदेखि ३ः४५ बजेसम्म बस्दासमेत उहाँको पालो आएन ।
हुन् त उहाँको पालो आओस् पनि कसरी ? उहाँको नाम कागजमा टिपेर सुटुक्क भित्र पु¥याई खोप कार्डमा नाम लेखेर बाहिर ल्याइदिने कोही थिएन । उहाँले चिनेको न ठूलो मान्छे थियो, न ठूलाहरुले उहाँलाई नै चिन्थे । चाउरी परे पनि उज्यालो अनुहार भएको, कपाल ढाकेर ढाका टोपी लगाएको, मुख छोपेर मास्क लगाएको, दौरा सुरुवाल र इस्टकोट लगाएको, एक हातमा पाइप र बाँस जोडेर बनाएको लौरो टेकेको, अर्को हातले छाता च्यापेको, प्लाष्टिकको जुत्ता लगाएको खोपको एक असली हकदारलाई चिन्न न त्यहाँ जनप्रतिनिधि थिए, न कर्मचारी । गर्मी र भीडले निस्सासिएर ड्युटी गरिरहेका प्रहरीले त्यस्तो ख्याल गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अरूलाई त कसरी आफन्त, घरपरिवार, पार्टी र गुटका मान्छेलाई खोप दिने भन्ने चिन्ता थियो ।
सुरुमा बूढापाकाले खोप पाउने हो भन्ने सुन्नुभएका उहाँ सबै आशा मरेपछि “नागरिकता फिर्ता पाइयो भने घर लाग्छु” भन्दै स्वास्थ्य कार्यालयको ढोकाअघि भुईंमा बस्नु भयो । उहाँसँगै थिए श्रीभक्त राई, श्रीभक्तकी श्रीमती, फिदिम–४ का पदमबहादुर चौहानलगायत आठ–दशजना ज्येष्ठ नागरिक ।
स्वास्थ्य कार्यालयभित्र खोपको प्रपञ्च गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरु, कर्मचारीहरु तथा खोपको प्रबन्धका लागि बसेकाहरुले खोप सकियो भन्ने सन्देश बाहिर पठाए । त्यही बेला ढोकामा ज्येष्ठ नागरिकहरु ‘सानो मुख’ गरेर बसिरहेका थिए । उनीहरु न अरू जस्तो उफ्रिन र जोरजबर्जस्ती गर्न सक्थे, न त पहुँचवालासम्म पुग्न नै । ‘निरीह’ ज्येष्ठ नागरिकहरुसँग मौन आन्दोलन गर्नुको विकल्प थिएन ।
खोप सकियो भन्ने सुनेपछि रामकुमार राईसहितका ज्येष्ठ नागरिकहरु नागरिकताको प्रमाणपत्र फिर्ता खोज्दै हुनुहुन्थ्यो । यत्तिकैमा फिदिमका युवाहरुको समूहले आपत्ति जनायो । “घण्टौँदेखि ढोकामा बसेका बा–आमालाई कसरी खोप दिँदैनौ हेरौँ त !” बाहिर आवाज उठ्यो । न मापदण्ड र उमेर समूह नै । पहुँचका आधारमा खोप वितरण गर्नेहरुका पसिना अब भने छुटे । हस्याङफस्याङ रामकुमार, श्रीभक्त, पदमबहादुरसहितका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई खोप दिइयो । अब त ज्येष्ठ नागरिकहरुले न पालो पर्खनु प¥यो, न लाइन नै लाग्नु ।
“बाबु अन्तिममै भए पनि सुई लगाउन पाएँ”, खोप लगाएपछि रामकुमारले भन्नुभयो, “पानी झर्न लाग्यो । हामी चाहिँँ लाग्यौँ है ।”
सरकारले ५५ वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई भेरोसेलको खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेअनुसार रामकुमार राईसहितका ज्येष्ठ नागरिकहरुले सहजै खोप पाउनुपर्ने हो तर जिल्लाको सदरमुकाम भएको वडाकै एक वृद्धले पाँच घण्टा कुरेपछि अरूले आवाज उठाइदिँदा बल्लतल्ल खोप पाउँछन् भने दूरदराजका सामान्य नागरिकहरुले कसरी सहजै खोप पाउलान् ? उनीहरुलाई कसले सही सन्देश पु¥याइदेला ? अरू विशेष प्रकारका स्वास्थ्य सेवाहरुको पहुँचमा यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरु कहिले पुग्लान् ? खोप कुरिरहेकाहरुका प्रश्न थिए ।रासस
श्रावण २०, २०७८ बुधवार १३:१४:०९ बजे : प्रकाशित
सशस्त्र प्रहरी जवान कार्यलय परिसरमै मृत फेला
काठमाडौं । कैलालीमा एक सशस्त्र प्रहरी जवान मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । मृत फेला पर्नेमा ३१ वर्षीय प्रहरी जवान हरिष कुमार शाही रहेका छन् ।
डडेल्धुरा भागेश्वर १ का शाही धनगढी उप महानगरपालिका १ स्थित शसस्त्र प्रहरी बल नम्बर ३४ हेडक्वाटरमा कार्यरत रहेका थिए । उनी कार्यालय परिसरभित्रै बुधबार बिहान मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्।
उनको शव कार्यलयको कम्पाउण्ड नजिक पानी जमेको स्थानमा घोप्टो अवस्थामा फेला परेको जनाइएको छ । यस घटनालाई लिएर अहिले थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
श्रावण २०, २०७८ बुधवार १३:३२:३० बजे : प्रकाशित
कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याउने वातावरण बन्दै, शाक्यले भने– बाहिरिन तयार छु
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफू सम्मानजनक रुपमा प्राधिकरणबाट बाहिरिन तयार रहेको संकेत गरेका छन् ।
कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरण प्रमुख बनाउन उनको राजीनामा मागेको भनिएका बेला बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर शाक्यले आफु सम्मानजनक रुपमा अहिलेको पदबाट बाहिरिन तयार रहेको संकेत गरेका हुन् ।
सरकारले आफ्नो राजीनामा नमागेको जानकारी दिएका उनले तर, वैकल्पिक व्यवस्थाबारे भने सोधिएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार आफूलाई वैकल्पिक कुन जिम्मेवारी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी भएको बताए ।
आफ्नो क्षमता र दक्षताअनुसारको जुन जिम्मेवारी दिएर सरकारले खटाउने काम गर्न तयार रहेको बताएका शाक्यले तर, आफू अपमानजनक तरिकाबाट प्राधिकरणबाट नबाहिरिने बताए ।
यदी सरकारले हटाएमा अदालत जाने हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले विकल्प दिएर काममा खटाएमा अदालत जानुपर्ने अवस्था नआउने बताएका । उनकाअनुसार विकल्प दिएर काममा खटाए अन्याय नहुने हुँदा अदातल जानुपर्ने अवस्था नै आउँदैन ।
श्रावण २०, २०७८ बुधवार १६:३३:१८ बजे : प्रकाशित
# कुलमान घिसिङ
# विद्युत प्राधिकरण
# हितेन्द्रदेव शाक्य
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको मिर्गाैला प्रत्यारोपण सफल
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको सफलरुपमा मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरिएको छ ।
भारतको दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा उपचार पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको आज सफल रुपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको उनको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
दुवै मिर्गाैला फेल भएपछि गत असार २ गते एपोलो अस्पताल भर्ना भएका उनको बुधबार मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरिएको हो । मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरिएका खनाल केही समय अस्पतालमै रहेर आराम गरेपछि स्वास्थ्यस्थिति सामान्य भए पश्चात नेपाल फर्किने खनालको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको मिर्गाैला प्रत्यारोपणबारे जानकारी दिँदै उनको निजी सचिवालयले खनालको आधिकारिक फेसबुक पेजमा लेखेको छ :
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का बरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यू केहि समय अघिदेखि Dr. Akhil Mishra को निगरानी तथा नेतृत्वमा Apollo Hospital, Delhi, India मा उपचाररत रहनुभएकोमा आज Dr. Sandeep Guleria को सर्जरी टिमले वहाँको मृगौला प्रत्यारोपण सफलता पुर्वक सम्पन्न गरेको छ । अब वहाँ केहि समय अस्पतालमै रहि आराम गर्नुहुनेछ र स्वास्थ्य स्थिती सामान्य भए पश्चात नेपाल फर्किनु हुनेछ । यस बिचमा वहाँको स्वास्थ्यप्रति चासो र चिन्ता राख्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना सहित यो जानकारी सम्प्रेषण गर्दछौँ ।
श्रावण २०, २०७८ बुधवार १७:१६:५४ बजे : प्रकाशित
# मिर्गाैला प्रत्यारोपण
# झलनाथ खनाल
काठमाडौँ। कोरोना महामारीबीच काठमाडौँको नक्सालमा रु आठ अर्ब लगानीमा पाँचतारे होटल निर्माण भइरहेको छ । नेपालको व्यावसायिक घरानाका रुपमा स्थापित हुँदै गएको शङ्कर समूहले जगदम्बा हस्पिटालिटी गुप्र प्रालिअन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिका–१ स्थित नक्सालमा ‘होटल हिल्टन काठमाडौँ’ निर्माण गर्न लागेको हो ।
आठ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको उक्त होटललाई चेन होटलका रुपमा निर्माण गर्न लागिएको जगदम्बा हस्पिटालीटी गुप्र प्रालिका उपाध्यक्ष नीतिन शर्माले जानकारी दिनुभयो । विश्वमा छ हजारभन्दा बढी चेन होटल रहेको हिल्टन होटलको नेपालमा पहिलो पटक चेन होटल निर्माण गर्न लागिएको हो ।
सन् २०२० मा होटल निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सन् २०१६ बाट होटल निर्माण शुरु गरे पनि कोरोना महामारीका कारण होटल निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । सन् २०२२ को अन्त्य सम्ममा होटल निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी काम तीव्रगतिमा भइरहेको उपाध्यक्ष शर्माको भनाइ छ ।
पाँचतारे लक्जरी होटल हिल्टन काठमाडौँमा १७५ गेष्ट रुम रहनेछन् । हेल्थ क्लब स्पा, वातावरण अनुकूल स्वीमिङ पुल र फिटनेस सेन्टरसहितका सुविधा उक्त होटलमा उपलब्ध हुने प्रालिले जनाएको छ । उक्त होटलले स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वादका खाना उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।
उक्त होटलमा विवाह तथा सभा समारोहका लागि छुट्टै सभाकक्ष निर्माण हुने भएको छ । दुई तला अण्डर ग्राउण्डसहित बन्न लागेको १८ तल्ले भवनको १६औँ तलामाथि स्वीमिङ पुल रहनेछ । होटलमा नाइट क्लब, जिम हल, स्पालगायतका सुविधासमेत हुनेछन् ।
अमेरिकाबाट आयात गरिएको सेस्मिक ड्याम्पर प्रविधिबाट निर्माण गरिएको होटल भूकम्प गएका बेलामा समेत सुरक्षित हुने शङ्कर गुप्रका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवाल बताउनुहुन्छ । विदेशी पर्यटकलाई पूर्ण रुपमा सुरक्षित बनाउने आफ्नो योजना रहेको उहाँको भनाइ छ ।
निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएका तारे होटलको सङ्ख्या नेपालमा १४३ पुगेको छ । यो मुलुकभर सञ्चालनमा आएका एकतारेदेखि पाँचतारे होटलको सङ्ख्या हो । पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी मोहनबहादुर जिसीका अनुसार नेपालमा पाँचतारे १६, चारतारे १९, तीनतारे ३३, दुई तारे ४१ र एकतारे ३४ होटल सञ्चालनमा छन् । यस्तै पाँचतारे होटलस्तरका दुई बुटिकसमेत सञ्चालनमा छन् ।
सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरे पनि कोरोना महामारी विश्वभर फैलिँदा नेपालमा भ्रमण वर्षको कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो । विश्वका विभिन्न मुलुकसहित नेपालमा पनि नयाँ भेरियन्टसहितको पहिलो तथा दोस्रो चरणको कोरोना सङ्क्रमण देखिँदा नेपाल भ्रमणका लागि आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको छ ।रासस
श्रावण २०, २०७८ बुधवार १८:०८:१७ बजे : प्रकाशित
# पाँचतारे होटल
काठमाडौं - कपिलवस्तुमा कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट प्रहरी नायव निरीक्षकको ज्यान गएको छ । ज्यान जानेमा बाणगंगा नगरपालिका –९ भलवाडका ४५ वर्षीय शिव रायमाझी रहेका छन् । उनको मंगलबार अस्पतालमा उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय गोरुसिङ्गेमा कार्यरत रायमाझीलाई असार १४ गते कोरोना पोजेटिभ भएपछि उपचारका लागि काठमाडों लगिएको थियो । यससँगै कपिलवस्तुमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या एकसय ९७ पुगेको छ ।
श्रावण २०, २०७८ बुधवार २१:१७:०२ बजे : प्रकाशित